လ Buffalo အတွက်အားလပ်ရက်ရာသီကိုခင်တွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ယူနိုက်တက်စတိတ် နယူးယောက် ကြှဲ
by Sean Flynn က
အဆိုပါအားလပ်ရက်စဉ်အတွင်း Buffalo သန်းမျှသည် သာ. ကောင်း၏နေရာရှိတယ်
ကျွဲဆီးနှင်း၏ခြေ frigidly အအေးရက်ပေါင်းနှင့်အတူ၎င်း၏အစွန်းရောက်ဆောင်းရာသီအဘို့အလမ်းသိပ် flack ရရှိသွားတဲ့။ ကျနော့်အမြင်၌လည်းအားလပ်ရက်ရာသီဆင်နွှဲဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများ၏တဦးတည်းပါပဲ။ အဆိုပါမြို့နောက်ကွယ်မှသူတို့၏ tundra ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထွက်ခွာ, ရေခဲစကိတ်စီးခြင်း, စွတ်ဖားစီးခြင်းနှင့် hosting ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစျေးကွက်များကဲ့သို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ-related လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုအာရုံစိုက်နေဖြင့်၎င်းတို့၏ wintery ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းများရှာတွေ့ခဲ့သည်။
တချို့လူတွေကသူတို့ကအအေးမိအဘို့တည်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုန်မယ်လို့နေစဉ်, သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Buffalo မှဖူးကြပြီမဟုတ်။ လူတိုင်းကအစာစားခြင်းရှိမရှိ, စျေးဝယ်သို့မဟုတ်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုစာသားရှိပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောအိမ်နီးချင်းများ၏မြို့ဖြစ်၏အားလုံးအပြီးဒါကြောင့်သင်ရာသီလက်ခံအစားကနေ running ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူတစ်ဦးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်စတင်ရန်လာမည့်အချိန်, Buffalo အားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့တစ်အချက်ပါစေ။
ရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်း Downtown Go
တူးမြောင်း Buffalo ၏ Courtesy ။
သင်ကိုယ်တိုင်ရေခဲစကိတ်စီးခြင်းပန်ကာထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင် Buffalo သင်တို့အဘို့စုံလင်သည်။ အဆိုပါမြို့အားလပ်ရက်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားသင်သည်ထားရန်စုံလင်သောနှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့စီးစကိတ်ကွင်း, နှစ်ဦးစလုံးမြို့တွင်း, ပေးထားပါတယ်။
အဲဒီမှာအကြီးအကျယ်အလှဆင်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အားဖြင့်ကျောက်ချရပ်နားသောပြဇာတ်ရုံခရိုင်အတွင်းရှိ rotary ကိတ်ကွင်းဖွင့်ပေမယ့်အကောင်းဆုံးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ရှာတွေ့သူကိုသငျသညျမြားအဘို့အသင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့ချစ်ရသူအားလုံးအတှကျလက်ဆောင်တွေကိုဝယ်ယူပြီးနောက်သင်သည် Rotary ကိတ်ကွင်းအများပြည်သူအခမဲ့ကြားရတာဝမ်းသာဖြစ်လိမ့်မယ်ယခုရာသီခါး။
အားလပ်ရက်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှဒုတိယနှင့်အသစ်များထို့အပြင်တူးမြောင်းမှာစီးစကိတ်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ နယူးယောက်စီးတီးရှိ Rockefeller Center ၌ကိတ်ကွင်းနီးပါးသုံးကြိမ်အရွယ်အစားမှာသင်ကိုယ်တိုင်မှအာကာသအများကြီးရှိသည်ဖို့အာမခံပါတယ်။
တူးမြောင်း Buffalo ၏ Courtesy
သငျသညျရေခဲစကိတ်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပါဘူးသို့သော်သင်နေဆဲလတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်ယူလိုပါကစိတ်မပူပါနဲ့။ ကျွဲတူးမြောင်းမှာကိတ်ကွင်းမှာသီးသန့်မရရှိနိုင်ကြောင်းပထမဦးဆုံးရေခဲပြင်အတိုင်းစက်ဘီးစီးဖို့မူလနေရာဖြစ်သည်။ ချိန်ခွင်လျှာစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သောသူတို့အဘို့စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါစက်ဘီးရာအရပျ၌ဆိုင်ကယ်စောင့်ရှောက်မယ့်ဘောင်နှင့်အတူရှေ့မှာရှိတဲ့ဓါးနှင့်နောက်ကျောများတွင်ဘီးနှင့်အတူစီးနင်းလျှောက်လုံးတည်ငြိမ်သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
နှင်းဆီဟေးလ်အပေါ် Sledding Go
ဒါကပိုပြီးဖြစ်ပါတယ် Do-It-သင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားမှုအဲဒီမှာကနောက်ကွယ်မှမပါအဖှဲ့အစညျးရဲ့, ဒါပေမယ့်ဝဲ Park မှာနှင်းဆီဟေးလ်မှာ sledding တိုင်း Buffalonian တွေ့ကြုံသောအတိတ်အချိန်ဖြစ်သကဲ့သို့။ ငါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါ့မိသားစုနှင့်အတူလိုက်ရန်အသုံးပြုကြောင့်လျင်မြန်စွာတစ်အားလပ်ရက်အစဉ်အလာတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာသိပ်များစွာသောလူရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘယ်မှာအလုံအလောက်ချောင်မယ့်, သငျရှိရမယ့်တာရှည် drive ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါဒါကြောင့်တမြို့လုံးအလယ်၌လက်ျာဘက်ပါပဲ။ အကြှနျုပျ၏သာအကြံပြုချက်သင်ကယခုနှစ်လှည်သောအခြိနျကာလကိုရနိုင်အဖြစ်သင်ကားပါကင်အရိပ်လက္ခဏာမှအထူးအာရုံစိုက်ကြောင်းယာဉ်ရပ်နားသောအခါကြောင်း, သူတို့သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ပေးရချီတုံချတုံမရှိကြပေ။ သငျသညျ, ပြပွဲ hit မှထွက်ဦးသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စွတ်ဖါးဆောင်ကြဉ်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အဘယ်သူမျှမကြီးကြပ်မှုရှိမယ့်ကတည်းကအမြဲမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူလိုက်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ခြင်းမပြုမီ။
Stephan Rosger / Flickr ကို
အဆိုပါအဆိုပါနေရာများ၏အနာဂတ်နှင့်၎င်းတို့၏အထင်ကရတွမ်နှင့်ဂျယ်ရီရဲ့အတော်လေးဟာလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားသက်တမ်းကြာပိုင်ရှင်ကို 1941 ဒေသခံများကကတည်းကအတူတူမိသားစုထဲမှာခဲ့သောရပ်ကွက်အတွင်းအကြိုက်ဆုံးရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသာပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဗလာထိုင်နဲ့နောကျအဘို့အစွန့်ပစ်မည်ဟုဖြစ်စေကြောင်းစိုးရိမ်စေသော နှစ်အနည်းငယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လုံးဝအသစ်သောစားသောက်ဆိုင်က၎င်း၏အရပ်ဌာန၌ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့။ ကျေးဇူးတင်စရာသစ်ပိုင်ရှင်စားသောက်ဆိုင်၏အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်နှင့်ရက်စွဲမှ up ပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သောတစ်ဦးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးဖွင့်ပြန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။
တိုင်းအားလပ်ရက်ရာသီအဆိုပါနေရာဆင်တူတဲ့ခွက်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအတွက်, သူတို့ရဲ့နာမည်ကြီး Tom နှင့် Jerry ရဲ့ခရစ္စမတ်နှင့်အတူပြောရလျှင်င်တဲ့ပူနွေးတဲ့ရမ်-ထုံမွှန်းကော့တေးထပျကြှေး။ သူတို့ကျိန်းသေလူကြိုက်အများဆုံးင်သွန်းလောင်းပူဇော်ဖို့မြို့ထဲတွင်သာစားသောက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါနေစဉ်။ သူတို့ရဲ့စာရွက်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့ကြောင့်စစ်မှန်သော Buffalo အားလပ်ရက်ရာသီအဓိကပါပဲ။ သင်ကပြတင်းပေါက်ကထိုင်ခုံဖမ်းပြီးနှင့်ဆီးနှင်းကျရောက်အဖြစ်စျေးဝယ်တက်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် Elmwood ရိပ်သာလမ်းကိုဆင်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနေ့စွဲတွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်, သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေတစည်းနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
renee_mcgurk / Flickr ကို
ခက်အရက်ကိုသင့်စတိုင်မပါလျှင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်။ အစက်အပြောက်ကော်ဖီမြို့အတွက်အကောင်းဆုံးပူချောကလက်အချို့ရှိပြီးထံမှရွေးချယ်ဖို့မျိုးစုံနေရာများရှိပါတယ်။ သငျသညျထိုသူတို့၏မြို့လယ်တည်နေရာကသူတို့ရဲ့ Elmwood အစက်အပြောက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသစ်များ Hertel ရိပ်သာလမ်းဆိုင်ဦးကိုရှေးခယျြဖွစျစေ, ပြတင်းပေါက်များကတက်ခွေနှင့်လူသွားပါစောင့်ကြည့်ဖို့မြို့မပိုကောင်းအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မြို့လယ်တည်နေရာနှင့်အတူ Buffalo အတွက်တပ်ကိုစတင်မူရင်းကော်ဖီဆိုင်ခဲ့ကြသည်သူတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသစ်သောနေရာများတွင်ဖွင့်လှစ်။ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဖွင့်ကတည်းကမြို့သူမြို့သားတစ်ဦးကိုမြင်ခဲ့ပြီ ဒေသခံစျေးဆိုင်များတွင်စန်း တမြို့လုံးတစ်လျှောက်လုံးပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
Elmwood သို့မဟုတ် Hertel Avenues အပေါ်ဒေသခံစျေးဝယ်
Francis ကဒင်း / Getty
သငျသညျမှာသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်လက်ဆောင်များဖမ်းပြီးနိုငျသောကုန်တိုက်ကြီးတွေနဲ့ပလာဇာ၏ပဒေသာရှိပါတယ်နေစဉ်, အစစ်အမှန်အပေးအယူပေါ်မှာ Elmwood နှင့် Hertel Avenues ။ ဤရွေ့ကား strips တွေအမှန်တကယ်တဦးတည်း-of-a-ကြင်နာလက်ဆောင်တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, သိမ်းသွားလေ၏နှင့်လက်သမားအားဖြင့် run ဒေသခံစျေးဆိုင်တွေနဲ့တင်ဆောင်နေကြသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စျေးဝယ်သားအပေါငျးတစျခုခရီးစဉ်၌ပြစ်မှားမိဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှငျ့သငျလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှာတွေ့မှအာမခံပါတယ်။ သငျသညျရှေးဟောင်းပစ္စည်း, ပန်းချီ, အဝတျအစား, ဖိနပ်, အလှဆင်နှင့်အခြားလက်လုပ်ကုန်စည်တစ်ခုဌန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုလုံးကိုနည်းလမ်းတန်းစီ။ ဒါဟာတစ်နေ့လည်ခင်းအဘို့ကြီးစွာသောလှုပ်ရှားမှုရဲ့သင်တစ်ဦး Buffalo-တိကျတဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းကိုရှာဖွေရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုပါပဲ။
အဆိုပါ Artisan ဆောင်းရာသီစျေးကွက်များသွားရောက်ကြည့်ရှု
Wares အာဘော့ / Getty
Buffalo အတွက်စျေးဝယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အရပ်တို့ကိုအားလပ်ရက်ရာသီအတွင်းပြီးသားမရှိဆိုပါကယခုတစ်လျတ်ရှိပါတယ်။ ညာဘက်အားလပ်ရက်ရာသီရှေ့တော်၌ထိုမြို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတစ်လျှောက်လုံးတည်နေရာနံပါတ်၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချရန်ဒေသခံစျေးသည်အဘို့အစက်အပြောက်ပေါ်လာ။ သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် Buffalonian အမှတ်တရပစ္စည်းရှာနေလျှင်မြို့လယ်, Elmwood, Kenmore နှင့်မြောက် Buffalo တစ်လျှောက်လုံးကိုသင်စုံလင်သောအရပ်တို့ကိုများစွာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအဓိကလမ်း Down အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အဖြစ်အားလပ်ရက်လငျးကိုမွငျ
Youtube ကို၏ Courtesy
အဟောင်းလေး & အမျှဦးစီးဌာန Store ကို 1995 ခုနှစ်တွင်သူတို့၏တံခါးများကိုပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါအလှဆင်ခရစ္စမတ်ပြတင်းပေါက်သူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကသွားလေ၏။ နီးပါးနှစ်ပေါင်း 20 ပြတင်းပေါက်လစ်လပ်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းသောထိုင်ကာအကြိုက်ဆုံး Buffalo အစဉ်အလာတစ်ခုအတိတ်အချိန်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမနှစ်ကအနောက်တိုင်းက New York ရဲ့ပြဇာတ်ရုံခရိုင်အသင်းမှဦးစီးဌာနကစတိုးဆိုင်ကအသုံးပြုခဲ့မူရင်း display တွေများစွာနှင့်အတူ Main Street ဖို့အလှဆင်နောက်ကျောကိုဆောင်ခဲ့၏။ ယခုနှစ်တွင်အဆိုပါအလှဆင်နောက်တဖန် Main Street hit ဟုသတ်မှတ်ကြသည်နှင့်ဒီဇင်ဘာလ၏တစ်ခုလုံးကိုတစ်လမှတဆင့် run ပါလိမ့်မယ်။
ဝဲ Park မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်နိုင်ငံနှင်းလျှောစီး Go
သငျသညျ Buffalo ကဲ့သို့မြို့အလယ်၌ဖြစ်ခြင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်နှင်းလျှောစီးလေ့လာရေးခရီးအဘို့သင့်ရွေးချယ်မှုတော်တော်လေးကန့်သတ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာဝဲပန်းခြံ့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြောင်းကိုစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။ လက်ျာဘက်တမြို့လုံး၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပြီးဝဲ Park ကကြီးမားထင်းရှူးပင်တပင်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အတူလက်ဆွဲပွင့်လင်းအာကာသ၏ဧကကမ်းလှမ်းဖို့အကြီးအစက်အပြောက်ဖြစ်ပါတယ် 'ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းထိမှန်။ '
အဆိုပါ Buffalo ဂေးအမျိုးသားများရဲ့သံပြိုင်ကစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ယူပါ
Buffalo ၌ကြီးသောဂီတဟာကြက်သားတောင်ပံသကဲ့သို့ဘုံစဉ်အခါ, Buffalo ဂေးအမျိုးသားများရဲ့သံပြိုင်အားလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့လိဂ်၌တည်ရှိ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒီဇင်ဘာလသူတို့အားလပ်ရက်ရာသီမှစုံလင်စတင်ကြောင်းတစ်မူထူးခြားသောပြပွဲလုပ်ဆောင်။ ဤနှစ်တွင်, သူတို့ရဲ့ပြပွဲ "ဝိညာဉ်တော်သည်မနာသီချင်းဆိုကြလော့" ဒီဇင်ဘာလဒုတိယအနေဖြင့်စတုတ္ထမှတဆင့်အပြေးသာသုံးရက်ရှည်လျားသည်။ သင်သည်သင်၏လက်မှတ်များဝယ်ယူကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်ယခုငါအများကြီးပိုရှည်ထွက်ကိုင်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည် Poinsettia ပြရန်များအတွက်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်သို့သွားရောက်
Matej Divizna / Flickr ကို
ကျေးဇူးတင်စရာမဟုတျဘဲအားလုံးဒီ list အပေါ်လှုပ်ရှားမှုများငါတို့ရှိသမျှသည်အသင်ချမ်းအေးနေတဲ့ချိုးလိုအပျကွောငျးကိုသိသောကြောင့်အပြင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Buffalo ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်မှာနှစ်စဉ် poinsettia ပြပွဲအပူပိုင်းဒေသများကဲ့သို့ခံစားရကြောင်းခန်း၌နေစဉ်အတွင်းအားလပ်ရက်ရာသီအထိစိမ်ရန်သင့်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းကကလေးတွေနဲ့အတူမိသားစုများအဘို့ကြီးစွာသောရပ်တန့်အောင် poinsettias ၏ပွဲလမ်းသဘင်ဆင်တန်ဆာများနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောနှင့်အတူထွက်တကွဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့နာမည်ကြီးချောကလက်အဘို့အ Parkside Candy အားဖြင့်ရပ်တန့်
Parkside Candy Co. , ၏ Courtesy
မည်သို့ပင်ယခုနှစ်အချိန်, Parkside Candy မွို့၌ငါ့အကြိုက်ဆုံးအစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 1927 ကတည်းက Buffalo အတွက်အကောင်းဆုံးချောကလက်၏အချို့သောအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နှင့်အတွင်းပိုင်းထားပြီးအဆိုပါနေရာအရပ်ရုပ်ရှင်တွေလက်တဆုပ်စာအတွက်ပွဲနှင့်အတူကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံစိုက်မှုဖြစ်ပါတယ် (ရောဘတ်ရက်ဖော့နှင့် Glenn Close ကိုသရုပ်ဆောင်အမည်ရ "ဒီသဘာဝ" ။ )
သငျသညျရှေ့တံခါးများမှတစ်ဆင့်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသင်အချိန်ပြန်ယူဆောင်ခဲ့တော့သော်လည်းသကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့အမှုပေါင်းချောကလက်၏တရာကျော်ကအမျိုးမျိုးကိုင်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုနေရာအရပ်အားလပ်ရက်ရာသီများအတွက်စံနမူနာအလှဆင်ထားသည်။ သငျသညျကံကောင်းဆိုရင်သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောရငျးနှီးအတွေ့အကြုံအတွက်ကျောထဲမှာ alcove ထိုင်ခုံဖမ်းပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Alleyway ပြဇာတ်ရုံမှာ Play စယူ
Alleyway ပြဇာတ်ရုံ၏ Courtesy
Buffalo အတွက်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းလုပ်ဖို့အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးအရာတစ်ခုမှာ Alleyway ပြဇာတ်ရုံမှာပြသဖမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ကအခြိနျမဆှဲဖို့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးဒါသည်၎င်း၏ 34 ကြိမ်မြောက်တစ်နှစ်သွား "တစ်ဦးကခရစ္စမတ်ဇာတ်လမ်း" ၏သူတို့ရဲ့ဂန္တစ်အုပ်ဖြစ်, မြို့ထဲတွင်အပူဆုံးလက်မှတ်တွေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျကံကောင်းဆိုရင်သင်တစ်ဦးသည်လွန်ခဲ့သောမိနစ် matinee ဖမ်းပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ရှည်လျားလွန်းထွက်ကိုင်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာမြို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြပွဲများထဲမှင်ကြောင့်အအေးပိုင်း Buffalo ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမှသည်ခိုလှုံရာရှာနေကြသည်သောသူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောပါပဲ။
အဘယ်မှာရှိ Buffalo အတွက် Superbowl Watch မှ
မြို့ပြ Explorer များအတွက်အနောက်တိုင်းနယူးယောက်ပြီးပြည့်စုံသောလောက်မှာစွန့်ပစ်ဆွဲဆောင်မှုများ
အဘယ်မှာရှိ Buffalo အတွက်နှစ်သစ်ကူးဧဝကိုအခမ်းအနားကျင်းပရန်
ဖြစ်ရပ်များလမ်းညွှန်: Buffalo မှခရီးသွားတဲ့အခါမှာတစ်ခုချင်းစီရာသီကိုခင်တွယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဘယ်သူမျှမ, Buffalo နယူးယောက်စီးတီးမှ Next ကိုမဖြစ်ပါတယ် ... ပြီးတော့ဒါက Ok င်
ဟိုတယ် Butler: Tipping နှင့်တာဝန်များ
Louisville က Awesome ကို Is 15 အကြောင်းရင်းများ
ဗန်ကူးဗား, ကနေဒါမှာရှိတဲ့မိသားစုနေ့တွင်သလား 10 အရာ
အထဲကစစ်ဆေးနေ Worth အခမဲ့ဆီယက်တဲလ်ဆွဲဆောင်မှုများ
တောင်အမေရိကရဲ့ DIA del trabajador
တစ်ဦးကအွန်ရဲ့တောရိုင်းအပေါ်လမ်းလျှောက် (နှင့်တခါတရံထူးဆန်း!) ဘေးထွက်
မလေးရှားရဲ့ထိပ်တန်း 10 ဦးတည်ရာနေရာများ
အဘယ်အရာကို Cleveland ရဲ့အလုပ်သမားရေးရာနေ့တွင်သလားဖို့
ဘတ်ဂျက် Excalibur Las Vegas မှာမှာမဆိုးဖြစ်
ဘတ်စ်ကား, ရထား, လေယာဉ်နဲ့မော်တော်ကားအားဖြင့်မက်ဒရစ်မှပဲရစ်မြို့ကနေရယူလိုက်ပါလုပ်နည်း